Sidee daruuraha hadalka loo sameeyaa | Saadaasha Shabakadda
Sergio Gallego | | Daruuro
Xaqiiqdii waad aragtay marar badan intaad safrayso Baabuur ahaan waxay kuu qaban doonaan dareenkaaga, daruuro taxane ah in la sameeyo Waxayna ku wareegsan yihiin buuraha dushooda. Waa wicitaanada Daruuraha hadalka waxayna helayaan magacan xiisaha leh maxaa yeelay abuuristooda waxaa sabab u ah oraahda dhulka sida caadiga ah ee buuraha.
Daruuraha hadalka ayaa la abuuraa markii a cimilo kulul oo qoyan waxay la kulantaa buur jidka loo socdo waxaana lagu qasbay inay fuusho lakabyo aad u qabow. Waqtigaas, uumiga biyaha way ururaysaa oo kuwa quruxda badan ee ku wareegsan buuraha ayaa la sameeyay. Sida xaqiiqda xiisaha leh, dusha sare ee Mount Everest had iyo jeer waxaa ku wareegsan daruuraha hadalka.
Daruurahan ayaa sidoo kale aad ugu badan meelaha kale sida Andes markay afuufaan dabaylaha galbeedka taas oo ka timaadda Badweynta Baasifigga. Meel kale oo aad had iyo jeer ka heli doonto sameynta daruuraha kuleylka ah waa waqooyi-galbeed Mareykanka. Meelahan oo noocyada daruuraha ah badanaa laga helo way yeelan karaan ilaa 2,500 mm roobab sanadkii qaab biyo ah ama baraf ah.
Daruurahan hadalka leh had iyo jeer way xayiran yihiin buuraha dushooda meeshii lagu abuuray. Marka loo eego cabirka daruurahaas, waxaa jira noocyo kasta oo ay yihiin. Yar oo daboolaya qayb ka mid ah buurta ilaa maryo waaweyn taas oo daboolaysa shirkii oo dhan. Daruuraha ororaxku badanaa waxay leeyihiin qaab gebi ahaanba siman, in kasta oo markay dabayluhu dhacaan ay yeelan karaan qaab wareeg ah, gaar ahaan qaybta ugu sarraysa buurta.
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay qodobkaan ku saabsan sameynta Daruuraha hadalka iyo in hada laga bilaabo, markasta oo aad aragto, waxaad ogaan doontaa sida loo sameeyay iyo sida loo abuuray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Sidee daruuraha hadalka u samaysma
Wadamada aduunka ee ladagaalama abaaraha